Taxadarka of Air kombaresarada Air Oil SEPARATOR - Airpull (Shanghai) Sifeey Co., Ltd
1. Qaado Tayada Hawada Tifaftirayaasha galay Account In xaaladaha caadiga ah, hawada tilmaantay Tifaftirayaasha ahbaa ka kombaresarada hawada ku jira xaddi gaar ah oo biyo iyo saliid cabbeeyo, ayaa labadaba ka mid ah oo aan loo ogol yahay in mararka qaar. Xaaladdan oo kale, ma aha oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan kombaresarada hawada ku habboon, laakiin sidoo kale aad qabto in aad ku darto qaar ka mid ah qalabka daaweynta post.
2. Dooro kombaresarada aan lubricated oo soo saari kara hawada tilmaantay Tifaftirayaasha free kaliya ka saliidda. Marka daray la miira hoose ama sare ama qalajiyaha, kombaresarada hawada ka dhigi kara hawada tilmaantay Tifaftirayaasha lahayn content saliid ama biyo.
3. Heerka qalajiyo iyo badashada kala duwan sida uu sheegay looga baahan yahay macmiilka. Guud ahaan, si qaabeynta waa: kombaresarada hawada + taangi lagu kaydiyo hawada + FC culus SEPARATOR saliid-biyaha + qalajiyaha hawada qaboojiye + filter FT + FA filter micro ceeryaamo saliid + (dhuuqida ka qalleyl + FT + FH shaqeysiin filter carbon.)
4. taangi lagu kaydiyo hawada iska leh markabka cadaadiska. Waa in la qalabeeyey waalka ammaanka, gage cadaadiska, iyo qalabka kale ee amaanka. Marka lacagta dheecaan hawada waa ka 2m³ / min inay 4m³ / min, isticmaali taangi lagu kaydiyo hawada 1,000L. Waayo, lacagta laga bilaabo 6m³ / min to10m³ / min, dooro taangiga la mugga 1,500L in 2,000L.